Sida loogu daro kalandarka Eurocopa 2020 ee iPhone ama Mac | Wararka IPhone
Sida loogu daro jadwalka Eurocopa 2020 ee iPhone ama Mac
Faafida awgeed, Euro 2020 ayaa sanadkii hore dib ugu dhacday sanadka 2021, wali, weli sii tiro isku mid ah. Haa, hada oo La Liga uu dhamaaday, waxaad sugeysaa in Eurocup ay bilaabanto mana dooneysid inaad seegto kulan kasta, ha ahaato Spain ama kooxaha kale ee Yurub, waxa ugu fiican waa inaad isticmaasho kalandarkayaga.
Laakiin dabcan, ma tilmaami doono jadwalka, mid mid, dhammaan kulamada Euro 2020. Sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo waa iyada oo loo maro isku xirka aan ka tagayo xagga hoose. Xiriiriyahaan wuxuu noo sheegayaa maalinta iyo waqtiga dhamaan kulamada la qaban doono inta udhaxeysa Juun 11 iyo July 11 inta udhaxeysa 24-ka koox ee reer Yurub ee ku tartami doona 11 goobood.
Kalandarka si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiiyaa kooxaha loo kala saaray, sidaa darteed maahan inaan wax ka qabano dhinaceena, kaliya sug wargelinta u dhiganta oo la soco kanaalka halka laga sii deyn doono.
Si loogu daro jadwalka Eurocopa 2020 ee iPhone-ka, iPad-ka ama iMac waa inaan ku dhaqaaqnaa tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan.
Marka ugu horeysa, waa inaan soo booqano tan isku xirka.
Marka xigta, dhammaan xulashooyinka la soo bandhigay, waa inaan doorannaa Apple iCal. Halkii laga furi lahaa arjiga Kalandarka, ogeysiis shabakad ah ayaa la soo bandhigi doonaa iyadoo lagu casuumay inaan ku darno rukumo kalandarka, ogeysiin taas oo ah inaan ku riixno OK.
Haddii aan hawshan ka qabanno MacMarkaad gujineyso xiriirka, farriin si otomaatig ah ayaa loo soo bandhigi doonaa oo nagu martiqaadeysa inaan furno arjiga kalandarka. Markaad xaqiijineyso codsigaas, dalabka Kalandarka wuxuu ku furmayaa daaqad xaqiijin leh URL-ka kalandarka iyo meesha aan ku riixeyno Subscribe.
Marka xigta, waa inaan qor magaca kalandarka, xulo goobta iCloud (si ay ula jaanqaado dhammaan aaladaha) oo hubi in inta jeer ee cusbooneysiintu shaqeyneyso.
Xagee laga daawan karaa Euro 2020
Kooxda Mediaset (Telecinco iyo Cuatro) ayaa noo oggolaan doonta inaan aragno dhammaan kulamada Eurocup ee dhacaya bisha Juun 11 illaa iyo Julaay 11 oo furan oo nool.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Sida loogu daro jadwalka Eurocopa 2020 ee iPhone ama Mac
Miyaynu ku arki doonnaa qalab ku jira qodobka muhiimka ah ee WWDC 2021?